Yakavhara webhusaiti yeApple kuti itange nekuchengeta | Nhau dze iPhone
Sezvinowanzoitika muzviitiko izvi, kambani yeCupertino ichangovhara zvitoro zvese zvepamhepo kuti itange kuchengetwa kweiyo itsva iPhone 13 mugirini, iyo Mac Studio itsva, iyo yakagadziridzwa iPad Air uye zvimwe zvigadzirwa zvayakaratidza munguva yakapfuura. Chipiri Kurume 8. Vazhinji venyu vachazvibvunza chikonzero chekuvharwa kwewebhu uye haisi imwe kunze wedzera zvigadzirwa zvitsva zvakagadzirira kuchengetedzwa.
Apple online store yakavharwa
Sezvatataura pamusoro, zvitoro zveApple zvakavharwa izvozvi uye zvichatora nguva kuti zvivhurwe zvakare. Iyo Cupertino kambani iri kugadzirisa izvo zvinodiwa pawebhusaiti kuti ivhure kuchengetedza kweiyo nyowani iPhone 13 mugirini, iyo Mac Studio, Studio Display, iPad Air uye itsva iPhone SE.
Mitsipa yekuwana zuva rekutumira padhuze nezuva repamutemo rekutanga kwayo, iyo ingori mumazuva manomwe, ikozvino iri mupfungwa dzevashandisi vazhinji. Zviri pachena ndezvekuti Mac Studio neStudio Display itsva idzi ndidzo dzakasimudza kufarirwa kwakanyanya mumharidzo asi zvakare ichokwadi kuti zvigadzirwa izvi hazvina kunangana nevashandisi vese saka zvinofungidzirwa kuti vachange vaine stock yakakwana kune vese vanoda kuchengetera yavo imba kana kutora muchitoro hazvitore nguva yakawandisa. Nakidzwa nekuita uku kuri chikamu chechiitiko icho Apple inopa mukutenga kwayo. Uchatenga mudziyo upi? Iwe uchatenga iyo itsva Mac Studio? Tisiye yako meseji mubhokisi remashoko.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple Store » Yakavhara webhusaiti yeApple kuti itange nekuchengeta
Nomad Leather Mhosva neMagSafe
Mumwe mufananidzo weavo vanogona kunge vari anotevera AirPods 3